Ogaden News Agency (ONA) – ONLF oo Bayaan Kasoo Saartay Shidaalka Ogadenya.
ONLF oo Bayaan Kasoo Saartay Shidaalka Ogadenya.
Posted by ONA Admin	/ June 29, 2018
Dawlada Itoobiya ayaa maanta Ogadenya ku qabatay xaflad xadhiga lagaga jaray soo saarista gaaska iyo saliida ceegaagan Ogadenya. Ra’iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa TV ga ka sheegay in soo saarista shidaalka Ogadenya ay gacan wayn ka gaysan karto kobaca dhaqaalaha iyo abuurista fursado shaqo, taasi oo imanaysa xilli shacabka Soomaalida Ogadenya uu wali kujiro cuna qabatayn dhaqaale, mid banii’aadam iyo dhibaatooyin badan oo ka socda jeeslasha dadka lagu ciqaabo ee ku yaalada Ogadenya.
Si kastaba ha ahaatee, waxa meesha ka maqan waa shacabka Soomaalida Ogadenya, kaasi dhulkiisii laga soo saaray shidaalka isla markaana la qorshaynayo ka faa’iidaysiga khayraadkiisii isagoon laga qaybgalinin wax talo ah ama saamayn ahna aan ku lahayn. Sidaas darteed, Jabhada ONLF marnaba ogolaan mayso in lasoo saaro khayraadka dabiiciga ah ee Ogadenya iyadoon xal siyaasadeed laga gaadhin colaada gaamurtay xalkaas oo u horseedi kara shacabka Soomaalida Ogadenya inay shuruud la’aan aayo-hooda si xorriyad iyo madax-banaani leh ay uga tashadaan.
Ogadenya waxay ahayd goob dagaal mudo dheer oo qiyaas ahaan gaadhaysa hal qarni, mudadaas waxa uu si joogta ah ugu jiray shacabka Soomaalida Ogadenya halgan iska caabin ah oo lagaga soo horjeedo Gumaysiga Itoobiya ee dhulkiisii kusoo duulay. Taliska Gumaysiga ayaa u adeegsaday shacabka cadaadin iyo dhibaato joogta ah meeshii xal siyaasadeed oo taaba gala ah lagu raadin lahaa dhibaatada ku habsatay shacabka Soomaalida Ogadenya. Itoobiya ayaa awood ciidan u adeegsatay ka hortagida rabitaanka shacabka isla markaana inkirtay aayo-ka tashigooda ay xaqa u leeyihiin. Arintan oo keentay sadex dagaal oo dalka ka dhacay laga soo bilaabo 1963-dii oo dhex maray jabhadaha Soomaalida Ogadenya, Jamhuuriyada Soomaaliya, Itoobiya iyo quwado caalami ah oo kamid ah beesha caalamka.
Itoobiya iyo beesha caalamku waxay labaduba iska indho-tireen aas aaska dhabta ah ee keentay colaada ka taagan Ogadenya oo saamayn balaadhan ku leh xasiloonida iyo ammaanka guud ahaan Gobolka Geeska Africa.
ONLF waxay si dhaw isha ugu haysaa isbadallada siyaasadeed ee taliska Itoobiya uu ku talaabsaday. Khudbadaha Ra’iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya uu jeediyay waa kuwo muujinaya ififaalo wanaagsan iyo talaabo ididiilo mustaqbal xambaarsan oo dhanka wanaagsan loo qaaday. Si kastaba ha ahaatee, ONLF waxay rumaysan tahay in ay arintani bilaw wanaagsan oo macno balaadhan iyo nabadgaliyo waanta uu noqon karo oo kaliya hadii isbadal muuqda oo taabogal ah lagu sameeyo dhaqanka guracan ee taliska Itoobiya ee ku salaysan dhibaataynta iyo cabudhinta shacabka taas oo kooxda u taliska Itoobiya ay ku amar ku taaglayso iskana dhago tirto rabitaanka shacabka iyadoo la adeegsanayo awood iyo go’aamo aan loo dhanayn oon shacabka lagala tashanin.
Ku dhawaaqista dhinaca kaliya ah ee ah in shidaalka Soomaalida Ogadenya lasoo saaray iyadoon colaada jirta aan xalan waara loo helin, shacabkii xaqa u lahaana waxba lagala socodsiinin isla markaana aan talada iyo maamulka khayraadkiisa dabiiciga ah waxba laga siinin waa mid dhaawici karta isku day kasta oo lagu doonayo in xasilooni iyo nabadgaliyo waarta ay ka hirgasha Ogadenya.